Icandelo lezahlulo zeFektri, abaXhasi - abaThengi baseChina abavelisi
Isitshisi sokungcangcazela siqhotyoshelwe koomatshini abathile kunye nezixhobo zokuvelisa amandla okonyusa, yinxalenye ebalulekileyo yokusetyenziswa kwentshukumo yoomatshini. Isitshisi sokungcangcazela sinokwenza into ifumane uhlobo oluthile kunye nobungakanani bentshukumo, ukuze iqhube ukungcangcazela kunye namandla ovavanyo kwinto, okanye ilinganise isixhobo sovavanyo lokungcangcazela kunye nesenzi.
Ipleyiti aluxhaswanga, eyaziwa ngokuba ipleyiti enemingxuma, ine elungileyo ukumelana banxibe, ubomi inkonzo ende, ukumelana ukufuma kunye nokumelana banxibe. Kufanelekile ukuba ihlambe, ihlolwe, ibekwe kumgangatho ofanelekileyo, igwebe indawo ethile, idilize, ishenxise amanzi kunye namanye amashishini oomatshini.
Iseti yeebhloko ze-eccentric ezihlengahlengisiweyo zifakelwe kuzo zombini iziphelo ze-rotor shaft, kwaye amandla anomdla afunyanwa ngokusebenzisa amandla e-centrifugal aveliswe kukujikeleza kwesantya esikhulu kunye nebhloko ye-eccentric. Uluhlu lokuhamba kwentshukumo yemoto yokungcangcazela inkulu, kwaye ingxolo yoomatshini inokuncitshiswa kuphela ukuba amandla anomdla namandla ahambelana ngokufanelekileyo.
Icandelo elisebenzayo le-vibrator sisilinda esimile ngathi sintonga esine-vibrator eccentric ngaphakathi. Iqhutywa yimoto, inokuvelisa ukushukuma okuphezulu kunye nokungcangcazela kwe-amplitude encinci. Ukuhamba kwentshukumo kunokufikelela kuma-12000-15000 amaxesha / min. inefuthe lokungcangcazela, ulwakhiwo olulula kunye nobomi benkonzo ende. Kufanelekile ukuba kungcangcazelwe imiqadi, iikholamu, iindonga kunye nezinye izinto kunye nobunzima bekhonkrithi.